के–के हुँदैछ २०२० मा ? कुन–कुन कुराले बदल्दैछ विश्वको तस्बिर ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के–के हुँदैछ २०२० मा ? कुन–कुन कुराले बदल्दैछ विश्वको तस्बिर ?
पुस २१ गते, २०७६ - १७:४७
काठमाडौं । २०२० को सुरुवातीसँगै विश्वमा नयाँ–नयाँ घटनाहरु देखिन थालेका छन् । सेक्टेम्बरदेखि लागेको आगोले अष्ट्रेलियामा ठूलो संकट निम्त्याएको छ । पछिल्लो समाचार बनाइरहँदा पनि अष्ट्रेलियामा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर छ । ५० करोडभन्दा बढि पशुपंक्षी र दर्जनौं संख्यामा मानिसहरुको आगोमा परि जलेका छन् ।
यता अमेरिकाले इरानी सेनाका प्रमुख कासिम सुलेमानीको हत्या गरेसँगै विश्व नै तेस्रो विश्वयुद्ध तर्फ जान लागेको त होइन भन्ने भय फैलिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिकता विधेयक लागु भएसँगै सुरु भएको आन्दोलन रोकिएको छैन् ।
आज हामी तपाईंलाई नयाँ वर्ष २०२० विश्वमा के–कस्ता घटनाहरु हुँदैछन् र त्यसले विश्वको तस्बिरलाई कसरी परिवर्तन गर्दैछ भन्ने बारे बताउनेछौं । जानौं नयाँ वर्षसँगै विश्वमा के–कस्ता घटनाहरु हुँदैछन् ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव
डोनाल्ड ट्रम्प फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्छन् कि हुँदैनन्, यसको फैसला २०२० भित्रै हुनेछ । २०१९ मा ट्रम्पले महाभियोगको सामना गरे । नयाँ वर्षसँगै उनिलाई सत्ता सञ्चालनमा कति सहज या असहज हुन्छ त्यो त देंखिदै जाला तथापि २०२० नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिय चुनावले भने ट्रम्पको भविष्यको फैसला गर्नेछ ।
हङकङमा लोकतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलन
हङकङमा चीनको विरुद्ध लोकतन्त्र समर्थकले २०१९ को वर्ष भरि नै आन्दोलन गरिरहे । नयाँ वर्षको पहिलो दिन पनि प्रदर्शनकारीले ठूलो ¥याली निकालेका थिए । २०२० मा आन्दोलनको स्वरुप र सरकारको दमन कस्तो खालको हुन्छ त्यो आकंलन मात्रै हुनसक्छ तथापि आन्दोलन आक्रामक रुपले नै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । यसको साथै २०२० भित्रै हङकङमा स्थानीय चुनाव पनि हुँदैछ ।
भारतको बिहार र दिल्लीमा विधानसभा चुनाव
भारतमा राजनीतिक गर्मागर्मीको सुरुवात वर्षको सुरुवातसँगै हुनेछ । देशको राजधानी दिल्लीमा आगामी फरबरीमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ । पछिल्लो चुनावमा दिल्लीवासीले दिल खोलेरै केजरीवाललाई जिताएका थिए । पाँच वर्षपछि पनि दिल्लीवासीले केजरीवालाई नै समर्थन गर्छन् या भोट परिवर्तन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यसको साथै अक्टोबर २०२० मा बिहारमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ । २४३ विधायकको लागि हुने विधानसभामा नितिश नै सत्तामा रहिरहन्छन् या लालूको पार्टी सत्तामा आउँछ त्यो समयले नै बताउला ।
२०२० खेलको महाकुम्भको वर्ष हुनेछ । यस पटकको ओलम्पिक जापानको राजधानी टोकियोमा हुँदैछ । यो सन् २००८ पछि एसियामा भएको अर्को खेल हो ।
मंगल ग्रहमाथि जीवनको खोजी
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले २०२० मा मार्स रोवरलाई मंगल ग्रहमा पठाउनेछ । मार्स रोवरको माध्यमबाट नासाले मंगलमा जीवनको सम्भावना छ कि छैन् भन्ने अध्ययन गर्नेछ । नासाले पठाउने रोवरमा २३ क्यामरा हुनेछ जो फरक–फरक तस्बिर पुरै ग्रहको नै पठाउनेछ । जसको सहायतबाट वैज्ञानीकले मंगल ग्रहमा जीवनको सम्भावना छ कि छैन् निष्कर्ष निकाल्नेछन् ।
स्पेस टुरिज्मको सुरुवाती
२०२० देखि अन्तरिक्षमा पर्यटनको पनि सुरुवात हुँदैछ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सामान्य मानिसहरुको लागि पनि अन्तरिक्षमा जाने कक्षाहरु दिँदैछ । नासाले नयाँ टुरिजमको विकासको लागि यसको सुरुवाती गर्न लागेको हो । नासाले उल्लेख गरेअनुसार अन्तरिक्षमा एक रात बस्नको लागि ३५ हजार डलर खर्च लाग्नेछ ।
5 जीको सुरुवात वर्ष
वर्ष २०२० मा अधिकांश देशमा5जी इन्टरनेटको सुरुवात हुनेछ । केहि कम्पनीहरुले5जी नेटवर्कमा आधारित मोबाइलको लञ्च गरिसकेका छन् । तर २०२० मा5जी मोबाइल प्रतिस्पर्धात्मक रुपले नै अगाडि आउनेछ । हुवाई, सामसुङ, नोकिया, श्योमी, भिभोलगायतका कम्पनीहरुले व्यवसायिक रुपमा5जी मोबाइल लञ्च गर्नेगरि तयारी गरेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आउने
वर्ष २०२० विद्युतीय सवारी साधनको वर्ष हुनेछ । २०२० मा विद्युतीय सवारी साधन प्रतिस्र्धात्मक रुपमा बजारमा देखिनेछन् । चर्चित कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी साधनहरु यस वर्षबाट व्यवसायिक रुपमा ल्याउँदैछन् । टाटा नेक्सन, टाटा अल्टरोज, एमजी जेड एस, महिन्द्रा केयूवी १००, महिन्द्रा एक्यूवी ३०० लगायतका नयाँ सवारी साधन यसै वर्ष लञ्च हुँदैछन् । जसको कारण बजारमा विद्युतीय सवारी साधनहरु व्यवसायिक रुपमा देखिनेछन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
पुस २१ गते, २०७६ - १७:४७ मा प्रकाशित
पुनर्बिमा कम्पनीको आईपीओको बाडफाँड भोलि हुने
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट...